musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Akangwara Maguta Munyika Yanhasi
Smart City Expo World Congress 2021 inounza indasitiri yemadhorobha pamwechete zvakare
Smart City Expo World Congress (SCEWC), iyo inotungamira yepasirese summit yemaguta uye akangwara emudhorobha mhinduro yakarongwa naFira de Barcelona, ​​ichaunza pamwechete indasitiri yekuvandudza mumaguta zvakare uye mu-munhu kupemberera gumi.th mhemberero yechiitiko. Kubva munaNovember 16 kusvika 18, nevaratidziri vanopfuura mazana mana nevatauri mazana matatu, uye pasi pedingindira. Isu tiri maguta atinoita, chiitiko ichi chichafunga pamusoro pekushandurwa kwemaguta makuru mushure mehosha uye kudiwa kwekuzadzisa zvido zvevagari vayo zvakanyanya kupfuura nakare.
Chiitiko ichi chichaunganidza nyanzvi dzepasi rese nemakambani kuti vagovane ruzivo uye kugadzirisa matambudziko mazhinji anosanganisirwa mukushandurwa kwemaguta. Kuvhara minda yakawanda inosanganisirwa, chirongwa chekongiresi chinoumbwa mumatema masere, Enabling Technologies, Energy & Environment, Mobility, Governance, Living & Inclusion, Economy, Infrastructure & Buildings, uye Safety & Security.
Mhinduro dzemadhorobha chinhu chakakosha cheiyo smart city ecosystem, uye makambani mazana mana anoratidza acharatidza zvigadzirwa zvazvino uye matekinoroji. Pakati pemakambani aya pane Abertis Mobility Solutions, Cisco, Guta Rinogoneka ne Mastercard, FCC Nzvimbo, Huawei, Microsoft, Motorola, Seat, Smart Ports: Piers of the future uye Ubiwhere. Saizvozvowo, maguta mazhinji nenyika zvicharatidza mapurojekiti achangoburwa anosanganisira anobva kuArgentina, Austria, Barcelona, ​​Belgium, Berlin, Brasil, Buenos Aires, Canada, Chile, Colombia, Estonia, Finland, France, Germany, The Hague, India, Italy, Latvia , The Netherlands, Norway, Paris, Poland, Sweden uye USA.
iye UCLG World Council
SCEWC ichapawo nzvimbo yeWorld Council yeUnited Cities and Local Governments Organisation (UCLG), musangano wepagore wetiweki huru yepasirese yemaguta nehurumende dzemuno, dzematunhu, uye dzemaguta. UCLG ichaungana muBarcelona, ​​pasi pezita rekuti "Smart Cities and Territories, Mbiru dzeCommon Agenda" kutsanangura zano rezvekufamba kwemasipareti uye mupiro waro kuUN Common Agenda.
Remangwana rekufamba uye zvinhu
SCEWC ichasimbisa basa rayo sepuratifomu yekugovana ruzivo kuburikidza nekuita zviitiko zviviri zvitsva: Mangwana.Mobility uye PUZZLE X. Mangwana.Mobility inorongwa pamwe chete neEIT Urban Mobility uye ichaisa pfungwa pakusimudzira dhizaini uye kugamuchirwa kwekufamba kwemaguta kwakasimba. mhando, nepo PUZZLE X, yakarongeka pamwe chete neAdvanced Material Future Preparedness Taskforce uye Mobile World Capital Barcelona, ​​ine chinangwa chekubata kugona kweFrontier zvinhu kugadzirisa mamwe matambudziko ari kutarisana nenharaunda.